Ikhandlela Elinephunga Elimnandi, Isibambi Samakhandlela, Ikhandlela Wax - Winby
Ukunikeza ikhwalithi ephezulu ngentengo yokuncintisana kuyisiqinisekiso
ubudlelwano bethu bokubambisana obuhlala isikhathi eside.
Ikhandlela le-Winby linefekthri ukukhiqiza lonke uhlobo lwamakhandlela anephunga elimnandi. Sinolwazi olucebile, ubuchwepheshe obuvuthiwe emakethe yamakhandlela cishe iminyaka engama-20. Futhi sineqembu lochwepheshe elizonikeza isevisi engcono kakhulu namakhandlela kumakhasimende ethu avela emhlabeni wonke.
Sinokuhlangenwe nakho okuhle kwezamabhizinisi emikhiqizweni elandelayo: Amakhandlela engilazi anephunga elimnandi, amalambu etiye, amakhandlela ezinsika, amakhandlela eVotive, izibambi zamakhandlela, izintambo kanye nezinye izinto zokusetshenziswa zamakhandlela.
Sinomnyango wethu wokuklama nokuthuthukisa, futhi singanikeza isevisi ye-OEM ne-ODM kumakhasimende.
Ama-batik ekhandlela azinzile futhi ayihambisani nemvelo.
Iphunga elimnandi elidumile nemibala emihle iyatholakala.
Sikholelwa ukuthi ikhwalithi yemikhiqizo nesevisi ingumphefumulo webhizinisi
ukusiza amaklayenti onge isabelomali nesikhathi.
izinto zokwakha amakhandlela
I-Wax Yemvelo Yesoya, Intambo Yekhandlela, Ibha Yezintambo
isitsha sekhandlela lengilazi
I-OEM Iyatholakala, Ilogo Eyenziwe Ngezifiso, Umbala Nosayizi
inkambiso ingilazi ikhandlela elinephunga elimnandi
I-Eco-friendly futhi Ayinantuthu
Sinefektri yethu yokukhiqiza amakhandlela anephunga elimnandi.Kukhona amakhulu ezitayela ezahlukene zamakhandlela anephunga elimnandi.
17oz 500ml Glass esitsheni Ikhandlela Jar ngokhuni...
Isitsha Se-Glass Ehlala Isikhathi Eside Esiqinile Sesoya Yemvelo ...
Isethi yekhandlela lesipho sethayela lensimbi likanokusho
Ikhandlela Elinephunga Elimnandi Lokuphromotha Kwe-Soy Wax...
Amakhandlela Esipho Esinephunga Elimnandi Lesipho anemvelo ...
Ingilazi enephunga elimnandi yesitayela se-vanilla yankee...
I-aromatherapy yemvelo yokhuni lwe-wick ikhandlela le-soy elinephunga elimnandi
Isiqukathi se-soy wax sangokwezifiso amakhandlela anephunga...
Ikhandlela le-Soy wax ingilazi yeglasi le-votive
frosted angenalutho ikhandlela isitsha ingilazi jar
Umkhiqizi wesipho sekhandlela - ikhandlela lobuciko GY01...
i-matte frosted custom Ikhandlela le-Glass reed diffuser...
Umhlobiso Wasekhaya Wemvelo We-soy Wax Cube Me...
Ukuhlobisa okunethezeka okunephunga elimnandi kwe-soy ca...
Frosted matte glass izitsha ezingenalutho zekhandlela izitsha
Ama-wax we-soy wemvelo okwenza amakhandlela
Imbiza yekhandlela lengilazi elinemibala eminingi ecacile ye-Matte Frosted...
Okunethezeka okunethezekile okungenalutho kwesitsha sesitsha sengilazi ye-matte ene...
China Intengo eshibhile I-Yoga Themed Candles - Natura...
Hlala ubukele ukuze uthole Izibuyekezo
Ungalungisa kanjani umhubhe ku-can yakho oyithandayo...
Ngaphambi kokwenza noma yini qiniseka ukuthi umhubhe yinkinga yangempela. Amanye amakhandlela abukeka sengathi ahubhukile empeleni aphethwe yimigodi. ikhandlela elibukeka sengathi lishunqiwe kodwa empeleni ha...
Indlela Yokulungisa Nokuvimbela Ukushunqulwa Kwekhandlela
Ukuthunga amakhandlela kuyisimo sokuncibilika kwekhandlela phakathi nendawo ngaphandle kokuncibilikisa yonke ingcina ezungezile, kushiye ingcina eqinile emaphethelweni esitsha. ...
2021 Amathrendi amasha ekhandlela lokubhucunga aqalisiwe
2021 Kwethulwa izitayela ezintsha zekhandlela lokubhucunga. Sethule ikhandlela elinephunga elimnandi le-SPA emkhunjini wekhandlela le-ceramic likanokusho, sicela uthole ikhandlela le-massage elinuka kamnandi elingezansi, ukuze uthole imininingwane eyengeziwe...